Brands chọsiri ike maka itinye aka kwesịrị ime ihe atọ a | Martech Zone
Mgbe ụwa nọ na mkpọchi n'afọ 2020, ahụmịhe dijitalụ jupụtara na onyonyo na vidiyo mere ka anyị jikọọ. Anyị tụkwasịrị ntụkwasị obi karịa ka ọ dị na mbụ na ụzọ ọdịnala nke nkwukọrịta dijitalụ wee nakwere ụzọ ọhụrụ na nke ọhụrụ iji kesaa ndụ anyị wee jikọọ site na ebe dị anya. Site na Zoom ruo TikTok na Snapchat, anyị dabere na ụdị njikọ dijitalụ maka ụlọ akwụkwọ, ọrụ, ntụrụndụ, ịzụ ahịa na naanị iso ndị anyị hụrụ n'anya na-akpakọrịta. N'ikpeazụ, ike nke ọdịnaya anya nwere ihe ọhụrụ pụtara.
N'agbanyeghị otú ụwa mgbe ọrịa na-efe efe si agbasa, ndị na-azụ ahịa ga-aga n'ihu na-achọ ọdịnaya anya n'akụkụ niile nke ndụ.
Ọgba aghara COVID-19 emeela ka ọnụọgụgụ nke ndị ahịa na-emekọrịta ihe n'ọtụtụ afọ.
Iji zute eziokwu ọhụrụ ndị a n'ụzọ na-eduga na nsonaazụ azụmahịa, ụdị kwesịrị ilekwasị anya n'akụkụ atọ nke ọdịnaya anya iji wuo njikọ dị mma na ndị na-ege ha ntị.
Na-enwu ọkụ na Microbrowsers na ntinye ihuenyo obere
Ị maara na ngwa izi ozi agafeela usoro mgbasa ozi ọha na eze na Ọnụọgụ ndị ọrụ na-arụsi ọrụ ike kwa ọnwa site na 20%? Ebe ọtụtụ ndị ọrụ na ngwa izi ozi nkeonwe, ụdị nwere ohere ugbu a iru ndị na-azụ ahịa site na microbrowsers, ma ọ bụ obere nlele mkpanaka ndị URL na-ekesa na ngwa izi ozi ndị ahụ.
Iji ruo ndị na-azụ ahịa n'oge mkpanaaka ahụ, ọ dị mkpa maka ụdịdị iji chọpụta microbrowsers na-ewu ewu n'etiti ndị ahịa yana ụlọ ọrụ enyere. N'ime Akụkọ Cloudinary steeti 2021 nke Visual Media, Anyị chọpụtara na n'elu ozi n'elu ikpo okwu brands ihu ọma bụ iMessage - ọ esetịpụ ọnụ ọgụgụ-otu ọnọdụ n'ụwa nile na gafee ngalaba.
WhatsApp, Facebook Messenger na Slack so na nyiwe ndị ọzọ ewu ewu akọwara dị ka ọchịchịrị mmekọrịta ọwa, nke na-akọwa ụdị ahịa ahịa ndị a na-adịghị ahụ anya enweghị ike ịhụ mgbe ndị ọgbọ na-ekerịta njikọ ma ọ bụ ọdịnaya. Ohere ntinye aka nke obere ihuenyo nwere ike ime nnukwu mmetụta na ọnụọgụ nke clicks na ntinye aka ọzọ, ihe ụdị taa enweghị ike ịgbaghara.
Ụdị nwere ike ịkwadebe onyonyo na vidiyo ha maka ihe nchọgharị micro site na ilebara mkpa pụrụ iche nke ọwa mmekọrịta gbara ọchịchịrị akọwapụtara. Igwe ihe nchọgharị ọ bụla ga-ewepụta ihe nlele njikọ ahụ n'ụzọ dị iche, yabụ ụdịdị kwesịrị ịkwalite ma hazie onyonyo na vidiyo ndị a ka ọ na-adọta njikọ njikọ. Site na nlebara anya nke ọma, ụdị nwere ike ime ọmarịcha echiche mbụ mgbe ejikọtara njikọ n'etiti ezinụlọ, ndị enyi na ndị ọrụ ibe.
Jiri vidiyo, vidiyo na vidiyo ndị ọzọ kesaa akụkọ na-adọrọ mmasị
Vidiyo vidiyo toro nke ukwuu n'oge ọrịa a na-efe efe, na-enye ụzọ mbata ụwa na-abụghị eziokwu anyị akpọchiri akpọchi.
Site na Jenụwarị 2019 na site na ọrịa na-efe efe, arịrịọ vidiyo gbagoro okpukpu abụọ site na 6.8% ruo 12.79%. bandwidth vidiyo tolitere karịa 140% na Q2 2020 naanị.
Ọnọdụ Mgbasa ozi Visual 2021 Cloudinary
Site na ịrị elu vidiyo na-aga n'ihu, ọ bụghị ihe ijuanya na ụdịdị na-ejikwa ma na-agbanwe ọdịnaya vidiyo karịa ka ọ dị na mbụ iji ruo ndị na-azụ ahịa. Enwere ike iji usoro akụkọ a dị ike mee ihe n'ọtụtụ ụzọ, gụnyere:
Vidiyo enwere ike ịzụ ahịa - Maka ụdị e-commerce, vidiyo ndị a na-ere ahịa nwere ike iweta ngwaahịa na ndụ, wee jikọta ndị na-azụ ahịa na ibe ngwaahịa dị mkpa ebe ha nwere ike ịzụrụ ihe n'ime oge.
3D vidiyo - Ụdị nwere ike iwepụta onyonyo eserese 360 ​​ma ọ bụ vidiyo site na ụdị 3D iji mepụta ahụmịhe ịzụ ahịa ọgbara ọhụrụ na nke na-anabata na ibe nkọwa ngwaahịa ọ bụla.
Vidiyo interface onye ọrụ - Enwere ike ịnye vidiyo n'ụzọ a na-atụghị anya ya na nke okike, dị ka n'elu ikpo okwu ntanetị maka ndị na-azụ ahịa na-egosi ihe dị ka echiche nhazi ma ọ bụ ndụmọdụ ịchọ mma, na-enyere aka ịmepụta ahụmahụ na-enweghị ntụpọ.
Iji jikọta vidiyo ndị a, ndị otu ahịa na ndị mmepe na-akwado ha gbanwee akụ vidiyo ugboro 17 na nkezi. Nke a bụ usoro dị mgbagwoju anya ma na-ewe oge nke chọrọ ndị mmepe iji jikwaa codecs vidiyo na ọnụ ọgụgụ. Iji chekwaa ọtụtụ narị awa nke oge mmepe wee kenye oge ahụ maka mbọ ndị ọzọ na-emepe emepe, ụdị nwere ike ịdabere na AI iji mee ka usoro ahụ dị ngwa na enweghị nkebi.
Kwalite nnabata ekwentị
Nzaghachi ekwentị bụ ihe dị mkpa, ọkachasị mgbe ekwentị mkpanaaka ruru ihe dị ka ọkara nke okporo ụzọ weebụ zuru ụwa ọnụ. Maka ụdịdị, nke a pụtara ịhụ na onyonyo na vidiyo na-anabata yana kachasị maka ngwaọrụ mkpanaka. Ndị na-adịghị eji imewe nzaghachi maka ihe ha na-ahụ anya na-efunahụ ohere ịkwalite ọkwa SEO. Ihe Ochie Weebụ nke Google bụ ihe niile gbasara ahụmịhe onye ọrụ, yana ibute nnabata ekwentị mkpanaaka ga-ahụ na webụsaịtị ika na-adị mfe na ọkwa ọchụchọ.
Ọzọ, nke a abụghị ọrụ dị mfe mgbe ị na-ebuga onyonyo na vidiyo na nyiwe dị iche iche kwa ụbọchị. Mụbaa nke ahụ site na windo nlele, nhazi na ngwaọrụ dị iche iche, yana ọ nwere ike bụrụ ọrụ dị oke egwu. Iji hụ na emeziwanye ihe niile maka ụwa mbụ nke ekwentị mkpanaaka, ụdị nwere ike itinye nzaghachi na-akpaghị aka iji wepụta otu ahụmịhe onye ọrụ dị elu, n'agbanyeghị ihuenyo ma ọ bụ ngwaọrụ. Site na akpaaka, ụdị nwere ike ịkwalite arụmọrụ ka ukwuu na usoro ọrụ ma kwalite ọkwa na ahụmịhe na mkpanaka.
Mee njikọ ka mma site n'ike nke ntinye anya na nke mbụ
Site na ọrịa na-efe efe, anyị mụtara na n'oge a na-ejighị n'aka, ụdị ahịa kwesịrị ịghọta otu esi ejikọta yana soro ndị na-ege ha ntị na-akpakọrịta. Ihe nchọgharị micro, vidiyo, na webụsaịtị mkpanaka ga-aga n'ihu na-akpụzi ka ndị na-azụ ahịa si aghọta yana soro ụdị ọkacha mmasị ha na-emekọrịta ihe. Automation na AI ga-adị mkpa iji wepụta ahụmịhe ndị a n'ogo.
Site na ihe onyonyo dị n'etiti ụwa ọhụrụ a nke ntinye aka dijitalụ, ụdị nwere ike mejuputa omume ndị a kachasị mma n'ime atụmatụ ha n'ozuzu ya wee bulie ogo na ahụmịhe ọhụụ-mbụ.
Akụkọ Mgbasa Ozi Ọhụụ steeti 2021
Tags: 2021vidiyo 3daiakpaakaigwe ojiigoogle core web vitalsizi ozi ngwamicrobrowsaka ekwentivideo mkpanakaweebụsaịtị mkpanakanhazi mmeghachi omumevidiyo ndị nwere ike ịzụ ahịaslacksteeti mgbasa ozi anyasteeti mgbasa ozi visualvidiyo interface onye ọrụihe omuma vidiyocodecs vidiyontughari vidiyovisual akamgbasa ozi anyawhatsapp